विवाहपछीको जीवनकाल शुखद बनाउन चाहानुहुन्छ भने अपनाउनुहोस राशीअनुसार सुहाउने क्रियाकलाप – सुदूरखबर डटकम
हरेक मानिसको जीवनको महत्वपूर्ण कदम हो, विवाह । तर विवाहपछि केहिको जीवन सफल र सुखद रहन्छ भने केहिको जीवनमा खटपट हुने गर्दछ ।
केहिको त मनमुटाव कै कारण नाता तोड्ने स्थितिसम्म आउँछ । तर के तपाईंलाई थाहा छ, विवाह सफल नहुनुको पछाडि केको दोष रहन्छ ?
विवाहमा मुख्यरुपमा शुक्र र बृहस्पति ग्रहहरु जिम्मेवार हुन्छन् । यि दुईमा पनि सबैभन्दा बढी शुक्र ग्रहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कुनै पनि वैवाहिक जीवन सफल हुन शुक्रसँगै चन्द्रमाको प्रभाव पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसैले कोही कसैको वैवाहिक जीवन सुखद भएन भने राशि अनुसारका निम्न उपाय गरेमा जीवन साथीसँग भएको आपसी खटपट घटेर जानेछ । र, पुन: प्रेममय जीवनको शुरुवात हुनसक्छ ।
मेष राशि भएकाहरुको वैवाहिक जीवन औसतमा राम्रो हुने गर्दछ । तर मेष राशिका मानिसको चञ्चलताले उनीहरुका ईमान्दार र समझदार जीवन साथीसँग केहि समस्या उत्पन्न गर्छ । मेष राशिले मिथुन र कन्या राशिका मानिससँग विवाह नगर्नु नै उत्तम हुन्छ । मेष राशि भएकाले स्फटिकको माला धारण गरेमा वैवाहिक जीवनमा उतारचढाव घटेर जानेछ ।
अधिकाशं वृष राशि भएकाहरुको वैवाहिक जीवन औसत हुने गर्दछ । वृष राशिका जीवन साथीले उनीहरुलाई प्रेम गरे पनि वैचारिक मत अलग भएका कारण वैवाहिक जीवनमा केहि खटपट हुनसक्छ । वृष राशिको अति संवेदनशीलताले वैवाहिक जीवनमा समस्या आउने गर्दछ । धनु र मीन राशिका मानिससँग विवाह गर्न नहुने वृष राशिले हनुमानको उपासना गर्नाले वैवाहिक जीवन सफल हुन्छ ।
मिथुन राशि हुनेहरुको वैवाहिक जीवन साधारण हुन्छ । यि राशिका मानिसहरुको वैवाहिक जीवनमा केहि उतारचढाव हुने गर्दछ । हुनत मिथुन राशिका जीवन साथी अहंकारी हुनसक्ने योग हुन्छ । त्यसैले मिथुन राशिका मानिसले मेष र वृश्चिक राशिका मानिससंग विवाह गर्नुहुदैन । वैवाहिक जीवनमा केहि समस्या आए पवित्र जलमा बेसार मिलाएर सूर्यदेवलाई अर्पण गरे वैवाहिक जीवन राम्रो हुन्छ ।
४. कर्कट राशि
ककर्ट राशिका ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन खासै सुखद हुँदैन । जीवन साथीसँग विचार मेल नखानाले अक्सर कर्कट राशिका ब्यक्तिको भावनामा ठेस पुग्दछ । भावानात्मक रुपमा संवेदनशील कर्कट राशिले कन्या तथा वृष राशिका ब्यक्तिसँग विवाह नगर्नु उचित हुन्छ । नियमित शनिदेवको उपासना गर्नाले कर्कट राशिका मानिसको वैवाहिक जीवनका समस्या निदान हुन्छ ।
५. सिंह राशि
सिंह राशिका जातकको वैवाहिक जीवन, विवाह लगत्तै केहि बिग्रने सम्भावना हुन्छ । तर समयानुसार हरेक समस्या मिल्दै जानेछन् । जीवन साथीसँग तालमेल नमिल्दा सिंह राशिका मानिसको वैवाहिक जीवनमा सामान्य खटपट हुन्छ । मकर तथा कुम्भ राशिका मानिससँग सिंह राशिले विवाह नगर्नु उत्तम हुन्छ । हरेक शनिबार अनुकुल समाग्री दान गर्नाले यि राशिका मानिसको वैवाहिक जीवनका समस्या टरेर जान्छन् ।
६. कन्या राशि
कन्या राशिका ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन शुरुवातमा समस्याग्रस्त हुन्छ । तर कन्या राशिले सुझबुझ राख्न सकेमा यो समस्या बिस्तारै घटेर जानेछ । कन्या राशिका ब्यक्तिका जीवनसाथीले पर्याप्त प्रेम गर्ने भएपनि भनेजति समय नदिनाले वैवाहिक जीवनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यि राशिका मानिसले कर्कट, वृश्चिक र मेष राशिका ब्यक्तिसँग विवाह गर्नु हुँदैन । कन्या राशिका ब्यक्तिले वैवाहिक जीवनमा समस्या आएमा ॐ नम: शिवायको जाप गरे यो निदान भएर जानेछ ।
७. तुला राशि
तुला राशिका मानिसको वैवाहिक जीवन खासै राम्रो हुदैंन । तुला राशिको स्वतन्त्र रहने चाहना र देखावटी गर्ने बानीले उनीहरुका जीवन साथीसँग राम्रो मेल हुँदैन । यि राशिका संगती मानिस इखालु हुने भएकाले तुला राशिले मिठो बोलिदिए पुग्छ । धनु र मीन राशिसँग विवाह गर्न राम्रो नहुने तुला राशिले दुर्गाको आराधना र ॐ दुं दुर्गाय नम: जाप गरेमा वैवाहिक जीवन लाभकारी हुनेछ ।
८. वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशिका ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन औसत रहन्छ । वृश्चिक राशिका अधिकाशंको वैवाहिक जीवन ठीकठाक मात्र हुन्छ । उनीहरु जीवन साथीप्रति अपेक्षित हुने तर जीवन साथीको भावना नबुझिदिँदा केहि खटपट हुन्छ । मिथुन र कन्या राशिका ब्यक्तिसँग वृश्चिक राशिका जातकले विवाह गर्नु हुँदैन । वैवाहिक जीवनको समस्या निराकरणका लागि वृश्चिक राशिले हिरा वा स्फटिक धारण गरेमा लाभकारी हुनेछ ।
९. धनु राशि
धनु राशिका अधिकांश ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन उत्तम रहन्छ । हुनत जीवन साथीसंग धनु राशिका ब्यक्तिको वैचारिक तालमेल हुँदैन । तर पनि झुक्न सक्ने क्षमताको कारणले धनु राशिका मानिसको वैवाहिक जीवन सफल हुन जान्छ । धनु राशिले वृष, तुला र कुम्भ राशिका ब्यक्तिसंग विवाह गर्नु हुँदैन । वैवाहिक जीवनका समस्या निराकरणका लागि धनु राशिका ब्यक्तिले तुलसीको मण्डपमा दियो बाल्नु उत्तम हुन्छ ।
मकर राशिका ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन औसत रहन्छ । वैवाहिक जीवनको शुरुवातमा नै जीवनसाथिसंग सम्बन्ध बिग्रेका कारणले नाता टुट्ने संभावना रहन्छ । तर मकर राशिका ब्यक्तिको जीवनमा समझदार र संवेदशील जीवनसाथी भएका कारणले हरेक समस्या समयसंगै स्वत: हटेर जान्छ । सिंह, वृश्चिक र धनु राशिका मानिससँग विवाह गर्न नहुने मकर राशिका ब्यक्तिले वैवाहिक जीवनमा आएको समस्या निराकरणका लागि महादेवको उपासना गर्नु लाभदायी हुन्छ ।
कुम्भ राशिका ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन आम अवस्थामा राम्रो हुँदैन । जीवन साथीसंग प्रेममय सम्बन्ध रहेपनि वैवाहिक जीवनमा दुबैको तालमेल नमिल्ने सम्भावना हुन्छ । कुम्भ राशिका मानिसको चञ्चलताले गर्दा जीवन साथीले शंका गर्ने स्थान पाउने हुन्छ । कुम्भ राशिका मानिसले कर्कट र सिंह राशिका ब्यक्तिसंग विवाह गर्नु उत्तम हुँदैन । सुखद वैवाहिक जीवनका लागि सूर्यदेवको उपासना गर्नु कुम्भ राशिका मानिसका लागि अचूक उपाय हो ।
मिन राशिका ब्यक्तिको वैवाहिक जीवन राम्रो हुने गर्दछ । यि राशिका मानिसको जीवन साथी समझदार र ईमान्दार हुन्छन् । मिन राशिका ब्यक्तिमा वैवाहिक जीवनमा आउने खटपट केवल धन वा सम्पति अभाव वा ब्यवस्थापनका कारण हुने गर्दछ । मिन राशिका ब्यक्तिले वृष, तुला र कुम्भ राशिका मानिससंग विवाह गर्नु हुँदैन । सुखद वैवाहिक जीवनका लागि वृक्षारोपण गरेर तिनको सम्भार गर्नु अति लाभदायी हुन्छ ।